Global Voices teny Malagasy » Sina: Endrika marobe isehoan’ny fanivànana aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Marsa 2010 20:09 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika avylavitra
Sokajy: Shina, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Politika, Teknolojia, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Ny 12 Martsa no Andro manerantany Hiadiana amin'ny Sivana amin'ny Aterineto ka namoaka ny lisitra farany avy aminy “Ireo fahavalon'ny Aterineto”  ny Reporter without Border [Reporters sans frontières] izay manondro mivantana an'i Sina [China], anatin'ireo firenena maro hafa tsy refesimandidy.
Jason Ng from Kenengba  dia manandrana manatavy resaka amin'ny fanehoana ireo rehetra endriky ny Sivana ataon'ny sinoa amin'ny Aterineto.
1. Sivana tsy mangarahara
A. Avy aiza ny fisokafana?
Alohan'ny zava-drehetra, avoitran'ny mpitoraka blaogy fa isaky ny maneho hevitra ny governemanta sinoa momba ny resaka aterineto, dia matetika no ametrahana fa hoe “tena midanadana be ny aterineto ao Sina” ary avy eo dia tohanana ilay fanambarana amin'ny fanolorana antontanisa toy ny hoe “maherin'ny 3,800 tapitrisa ny mpampiasa aterineto eto Sina”. Na izany aza, tsy misy fifandraisana mazava ireo fanambarana roa ireo.
B. Sivana tsy mitombina
Faharoa, tondroiny fa ny tena anton'ny ankahalan'ny olona ny Sivana atao amin'ny Aterineto ao Sina dia satria tsy ampy ny mangarahara amin'izy ity:
Indray maka dia nandefa lahatsoratra momba ny fanoherana ny fananganana toeram-pandoroana tany Panyu tao amin'ny Sina micro blog aho. Avy eo aho nahazo hafatra avy amin'ny webmaster nilaza fa nofafana ny lahatsoratro satria miaty zavatra tsy ara-dalàna. Nanontany aho hoe ny lalàna manao ahoana no nodikain'ilay hafatra, tsy nahazo valinteny aho. Mitranga koa ny zavatra toy izany any amin'ny SNS goavana any Sina.
Ny antony tsy mampangarahara ny mpametraka sivana amin'ny aterineto amin'ny asan'izy ireo dia satria tsy mangarahara koa ny fepetra fandrindràn'ny governemanta…Raha vao maizimazina ny fandrindràna, dia tsy ho afaka mihetsika ny olona raha ny fisainan'ny rafitra. Afaka manome ako miabo ny sampandraharaham-pitantanana ao amin'ny governemanta amin'ny hoe “Tiako ny CCP” rehefa ao anatin'ny fotoana mahafalifaly azy. Rehefa tonga indray ny fotoana mahasorena azy , dia raisiny ho toy ny fandrabirabiana izany. Ary ny hany azonao dradraina sisa dia ny manompa ny fàfan'ny solosainao ho “soavaly mihinam-bozaka sy fotaka” .
C. Fandàvan'ny Google
Vinavinain'ny mpitoraka blaogy fa anton'ny nahatonga ny Google tsy ho faly tamin'ny sivana tao Sina ny olan'ny fangaharahana:
Tany Sina, naharay fampahatsiahivana maro ny Google.cn mikasika ny fanakànana ireo vohikala na resaka mafampàna, ary tsy afaka mihitsy ianao hahita lasitra momba ireny fampahatsiahivana ireny, na fanazavàna araka ny lalàna. Fa ny ambàran-dry zareo dia ny hoe “fanakanana araka ny lalàna”.
2. Ny milin'ny Sivana
Nahatsikaritra fomba maromaro fanaovana sivana ao Sina ny mpitoraka blaogy.
A. Sivana ataon'ny tena
Tonga saina amin'ny fanakanana ireo teny mafampana ireo sinoa mpampiasa aterineto. Rehefa mandefa hafatra iray ry zareo, fomba hafa no mety hanehoan-dry zareo ny lohahevitra na fafany ny votoatiny mafampana.
B. Sivana ataon'ny milina
Amin'ny tranga hoe ny milina indray no manivana, anjaran'ny mpampiasa no mieritreritra hoe inona avy no lohahevitra mafampana isak'izay mandefa lahatsoratra ry zareo. Toy ity no hitsena ireo mpampiasa aterineto:
1. Raha nanoratra teny miisa 10,000 eo ianao, ka ny 100 na 101 amin'ireo teny mafampana, ary navoakanao ilay izy.
2. ho hitanao fa ny 99 ihany no hany mba azonao navoaka ary ny ambiny rehetra eo anelanelan'ny 99-9900 dia hanjavona avokoa.
3. tsy afaka ny hanavotra ireo teny miisa 9900 indray ianao fa dia tsy maintsy mamerina mitendry azy ireo.
4. avy eo ianao tonga saina fa ny laharana faha 100 sy 101 dia mafampana, ovanao ny filaza ary dia averinao alefa indray iny.
5. Avy eo ianao mahita fa teny 200 ihany no tafavoakanao satria ny laharana 201 dia mbola teny mafampana indray…
Ohatra hafa amin'ny milina mpanivana ny Sàkana Maitso [Green Dam] :
Rehefa avy nanokatra takelaka 10 tamin'ny browser-nao ianao, ka ny sary iray anatin'ny maro dia manana loko somary lokon-koditra. Dia izay! mikatona tampoka daholo ny takelakao rehetra. Raha niasa mivantana tamin'ny aterineto tamin'ny iray tamin'ireny takelaka ireny ianao, miala tsiny, very daholo ny zava-drehetra.
C. Sivana ho an'ny fiboridanana
Vohikala maro, indrindra ireo fanolorana vohikala, no manana ekipa mpanivana. Ny antony tsy maintsy nanakatonana an'i Fanfou dia ny tsy fananany ekipa mpanivana. Ireo vohikala toa an'i Sina dia manana tompon'andraikitra maherin'ny zato miasa amin'ny fanasivanana. Misy namana izay efa niasa tao amin'ny Tencent niteny tamiko fa isaky ny fotoana mafampana, ohatra mandritra ny Kongresy Nasionalin'ny Vahoaka isan-taona, dia nitombo ny asan'izy ireo. Tsy maintsy sivanin-dry zareo ny BBS, blaogy, ary ny mailaky ny mpampiasa voasarika. Any Sina, tsy misy miafina ny fifandraisana amin'ny mailaka.
Tsy manana lalàna loatra ny mpanivana ny fiboridànana amin'ny fanaovany izany. Matetika izy ireo no mitsara araky ny toromariky ny lehibeny. Ary aleon'izy ireo mamafa hafatra 1000 toy izay mamoaka hafatra iray manelingelina.
D. Ny tarika mpanivana
Ny ankamaroan'ny vohikala dia manana laharam-pamantarana daholo [license number] ka dia mora amin'ny governemanta ny mifandray amin'ny webmaster amin'ny fotoana rehetra ilan-dry zareo an'izany. Na rahoviana na rahoviana ny Sampandraharaham-panjakana mpanara-maso ny Aterineto no mahita vaovao ‘tsy ara-dalàna’ amin'ny aterineto, dia mety hiantso ny foiben'ny données ry zareo ary ny foiben'ny données indray no miantso ny webmaster mba hamafa ny hafatra “tsy ara-dalàna”.
E. Ny tariky ny Red Head document
Matetika, ny mpanivana ny aterineto dia mangataka ny vohikala hamafa ny votoatiny, nefa koa mangataka azy ireo mba hamerina handefa any aminy na handefa mivantana ny valin'ny fikarohana ho any amin'ny vohikala ofisialy sasantsasany. Ny fampahatsiahivana toy izany no antsoina mandrakariva amin'ny hoe Red Head paper. Na izy ireny avoakan'ny sampan-draharaha mpanara-maso ny aterineto na avy amin'ny biraon'ny fampahalalam-baovaon'ny governemanta.
Ho an'ireo vavahadin-tserasera dia mahazo fampahatsiahivana avy amin'ny Sampan-draharaha mpanara-maso ny aterineto isan'andro ry zareo. Matetika ny fampahatsiahivana dia mikasika ny :
1. ny tsy azo tantaraina
2. ny tokony ho tantaraina
3. ny tokony ho lohateny lehibe
4. ny vaovao tokony havoitra any anaty resaka ifanakalozana
5. ny teny fototra tokony hosakanana na havantana any amina vohikala efa voafaritra mialoaha
6. ny vaovao tokony ho anjaran'ny Xinhua sy ny People's Daily news irery ihany no mamoaka azy
F. Ny mpitsara avy amin'ny Reny
Avy amin'ny lafim-piainana samihafa ny mpikambana ao amin'ny “Mpitsara avy amin'ny Reny”. Betsaka amin'izy ireo no tsy dia manana ny fahalalana momba ny aterineto. Mahazo fanofanana avy amin'ny governemanta ry zareo ary dia manome tsy tapaka votoatina vohikala tsy dia sahaza loatra ho an'ny ankizy any amin'ny mpitantana.
G. Misotro dite sady miresaka
Raha manohy mamoaka vaovao tsy dia mahafaly loatra ny governemanta ianao, na raha toa ianao manohana hetsi-bahoaka toy ny filaharana na fanentanana momba ny zon'olombelona, dia mety hahazo fanasana hiara-misotro dite. Tamin'ny taona lasa talohan'ny fetim-pirenena, nisy kolejiana iray nanakiana ny fandehan'ny fikarakarana ny fety ho toy ny fandaniam-potoana fotsiny tao amin'ny Twitter-any. Tsy ela, nasain'ny polisim-pirenena misahana ny filaminana mba hiara-misotro dite taminy izy. Norahonan-dry zareo izy fa raha mbola manohy manoratra toy izany dia tsy ho afaka manantena ny ho tafiditra hianatra any amina Lisea lehibe.Nandritry ny fotoana maharitra, nisafidy fahanginana io mpianatra io tao amin'ny twitter.
H. Ilay rindrina goavam-be
Sary iray mahalaza teny an'arivony maro:
I. Ny Tariky ny 50 Cent
Taorian'ny traikefa an-taona maro nanaovana sivana, tonga saina ny governemanta Sinoa fa tokony hotefena hanaraka làlan-jotra voafaritra ny fisainan'ny olona. Izany no antony nananganana ny mpamela hafatra amin'ny aterineto [Internet commentator] izay sady manampy koa amin'ny famahana ny olan'ny tsy fananana asa. Matetika fantatra amin'ny hoe Tariky ny 50 cent ireny mpamela hafatra ireny. Isaky ny mila manefy ny fisainan'ny olona ny governemanta, dia mirotsaka an-tsehatra ny Tariky ny 50 cent. Ry zareo no manoratra sy manely ny hevitry ny governemanta any amin'ny BBS, blaogy, ireo vavahadin-tserasera na hatrany amin'ireo fampitam-baovao tranainy toy ny gazety an-tsoratra sy ny T.V. Miara-mirotsaka an-tsehatra daholo izy rehetra mazàna, indraindray tadiavina vao mandeha irery.
Na eo aza anefa ny hamaroana sy ny endrika saro-bahana ananan'ireo fomba fanivànana samihafa ireo, ity mpitoraka blaogy ity dia mbola manantena fa tsy maintsy ho tonga ny demokrasia ka hisolo toerana ny fanaraha-masomivatravatra mahazo ny fitenenana sy ny fanehoan-kevitra.
(hitanao koa ity lahatsoratra ity ao amin'ny Global Voices Advocacy )
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/03/28/5429/
 lisitra farany avy aminy “Ireo fahavalon'ny Aterineto”: http://www.rsf.org/World-Day-Against-Cyber-Censorship.html